ဗုဒ္ဓတရားတော်များ: အရက္ခိတသုတ်- (မစောင့်ရှောက်အပ်သည်)
သူတော်ကောင်းတရားများ လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်ရန် ဤအ၀ိုင်းလေးများ အတွင်းမှာ တရားစာများ တရားပုံများကို သွပ်သွင်းထားပါတယ် သင်တို့ စိတ်တိုင်းကြ ကူးယူဖြတ်တောက် လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Sunday, February 1, 2009
အရက္ခိတသုတ်- (မစောင့်ရှောက်အပ်သည်)ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားအထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ ရှိခိုးပြီးလျှင် တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေသော အနာထပိဏ်သူဌေးအား မြတ်စွာဘုရားသည်- ''ဒါယကာ စိတ်ကို မစောင့်ရှောက်လျှင် ကာယကံကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည် မမည်၊ ဝစီကံကို လည်း စောင့်ရှောက်သည် မမည်၊ မနောကံကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည် မမည်။ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံကို မစောင့်ရှောက်သူ၏ ကာယကံသည်လည်း (ကိလေ သာဖြင့်) စိုစွတ်၏၊ ဝစီကံသည်လည်း (ကိလေသာဖြင့်) စိုစွတ်၏၊ မနောကံသည် လည်း (ကိလေသာဖြင့်) စိုစွတ်၏၊ (ကိလေသာဖြင့်) စိုစွတ်သော ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံရှိသူ၏ ကာယကံသည်လည်း ဆွေးမြေ့၏၊ ဝစီကံသည်လည်း ဆွေးမြေ့ ၏၊ မနောကံ သည်လည်း ဆွေးမြေ့၏၊ ဆွေးမြေ့သော ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ ရှိသူအား ကောင်းသော သေခြင်း မဖြစ်နိုင်၊ ကောင်းသော ကွယ်လွန်ခြင်း မဖြစ် နိုင်။ဒါယကာ အထွတ်တပ်သော အိမ်ကို ကောင်းစွာ မိုးမထားလျှင် အထွတ်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည် မမည်၊ အခြင်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည် မမည်၊ နံရံကို လည်း စောင့်ရှောက် သည် မမည်၊ အထွတ် သည်လည်း (မိုးရေဖြင့်) စိုစွတ်၏၊ အခြင်တို့သည်လည်း (မိုးရေဖြင့်) စိုစွတ် ကုန်၏၊ နံရံသည်လည်း (မိုးရေဖြင့်) စိုစွတ်၏၊ အထွတ်သည်လည်း ဆွေးမြေ့၏၊ အခြင်တို့ သည်လည်း ဆွေးမြေ့ကုန် ၏၊ နံရံသည်လည်း ဆွေးမြေ့၏၊ဒါယကာ ဤအတူပင်လျှင် စိတ်ကို မစောင့်ရှောက်လျှင် ကာယကံကိုလည်း စောင့် ရှောက်သည် မမည်၊ ဝစီကံကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည် မမည်၊ မနောကံကို လည်း စောင့်ရှောက်သည် မမည်။ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံကို မစောင့်ရှောက် သူ၏ ကာယကံသည်လည်း (ကိလေသာဖြင့်) စိုစွတ်၏၊ ဝစီကံသည်လည်း (ကိလေသာဖြင့်) စိုစွတ်၏၊ မနောကံသည်လည်း (ကိလေသာဖြင့်) စိုစွတ်၏၊ (ကိလေသာဖြင့်) စိုစွတ်သော ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံရှိသူ၏ ကာယကံသည် လည်း ဆွေးမြေ့၏၊ ဝစီကံသည်လည်း ဆွေးမြေ့၏၊ မနောကံသည်လည်း ဆွေးမြေ့၏။ ဆွေးမြေ့သော ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ ရှိသူအား ကောင်းသော သေခြင်း မဖြစ်နိုင်၊ ကောင်းသော ကွယ်လွန်ခြင်း မဖြစ်နိုင်။ဒါယကာ စိတ်ကို စောင့်ရှောက်လျှင် ကာယကံကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည် မည်၏၊ ဝစီကံကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည် မည်၏၊ မနောကံကိုလည်း စောင့် ရှောက်သည် မည်၏၊ ကာယကံ ဝစီကံမနောကံကို စောင့်ရှောက်သူ၏ ကာယကံ သည်လည်း (ကိလေသာဖြင့်) မစိုစွတ်၊ ဝစီကံသည်လည်း (ကိလေသာဖြင့်) မစိုစွတ်၊ မနောကံသည်လည်း (ကိလေသာဖြင့်) မစိုစွတ်၊ မစိုစွတ်သော ကာယကံဝစီကံ မနောကံ ရှိသူ၏ ကာယကံ သည်လည်း မဆွေးမြေ့၊ ဝစီကံသည်လည်း မဆွေးမြေ့၊ မနောကံသည်လည်း မဆွေးမြေ့။ မဆွေးမြေ့သော ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ ရှိသူအား ကောင်းသောသေခြင်းဖြစ်နိုင်၏၊ ကောင်းသော ကွယ်လွန်ခြင်း ဖြစ်နိုင်၏။ဒါယကာ အထွတ်တပ်သော အိမ်ကို ကောင်းစွာ မိုးထားလျှင် အထွတ်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည်မည်၏၊ အခြင်တို့ကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည် မည်ကုန်၏၊ နံရံကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည် မည်၏၊ အထွတ်သည်လည်း (မိုးရေဖြင့်) မစိုစွတ်၊ အခြင်တို့သည်လည်း (မိုးရေဖြင့်) မစိုစွတ်ကုန်၊ နံရံသည်လည်း (မိုးရေဖြင့်) မစိုစွတ်၊ အထွတ်သည်လည်း မဆွေးမြေ့၊ အခြင်တို့သည်လည်း မဆွေးမြေ့ကုန်၊ နံရံသည်လည်း မဆွေးမြေ့။ဒါယကာ ဤအတူသာလျှင် စိတ်ကို စောင့်ရှောက်လျှင် ကာယကံကိုလည်း စောင့် ရှောက်သည် မည်၏၊ ဝစီကံကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည် မည်၏၊ မနောကံကို လည်း စောင့်ရှောက်သည် မည်၏။ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံကို စောင့်ရှောက်သူ ၏ ကာယကံသည်လည်း (ကိလေသာဖြင့်) မစိုစွတ်၊ ဝစီကံသည်လည်း (ကိလေ သာဖြင့်) မစိုစွတ်၊ မနောကံ သည်လည်း (ကိလေသာဖြင့်) မစိုစွတ်၊ မစိုစွတ်သော ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ ရှိသူ၏ ကာယကံ သည်လည်း မဆွေးမြေ့၊ ဝစီကံ သည်လည်း မဆွေးမြေ့၊ မနောကံသည်လည်း မဆွေးမြေ့။ မဆွေးမြေ့သော ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံရှိသူအား ကောင်းသော သေခြင်းဖြစ်နိုင်၏၊ ကောင်း သော ကွယ်လွန်ခြင်း ဖြစ်နိုင်၏'' ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။၇- အရက္ခိတသုတ်၊ သမ္ဗောဓ၀ဂ်၊ တိကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ သာဓုခေါ်ခြင်းသည် ကောင်းလှပေ၏။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။...
2/01/2009 03:25:00 PM
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ... (ဒယ်အိုး)
Ashin Acara ရွာဦးကျောင်း Ashin Aggacara Ashin Aggasena Bhante Aggadhammo Ashin Aseik Kha Na Ashin Ayupala Ashin Abhayasara Ashin Awthada Ko Ariya Ashin Agga Abhi Dhamma Aggana Lovelyagganan Ashin Ashinardeiksa Agga Vamsa Ashin Bhavita Ashin Bhikku Bhikkhu Bodhi Bunthoeun Mieng Bodhi Sayardaw Buddhasi Ssa Bhante Buddharatna Buddhaa Dhammaa Ashin Candasiri Ashin Candavara Ashin Cakkapala Bhikkhu Candimar Canda Siri Czech Sarana Candavara Ashin Ven Candamukha Ven Cetobhavaniya Ven Cittara Bhante Cetana Ucakka Pala Canda Siri Ashin Dhammapiya Ashindhammawon Tha Ashin Dhamma Ashin Dhammapiya Bhante Dhamma Jyoti Dhammaduta Bago Dhamma Dayada Dhamma Yay Sin Dhammagarden Ashin Dhamma Ganga Dhamma Garden Dhamma Messenger Dhamma Piti Dhamma Rakhita Dhammadownload Web Master Dhamma-Foundation Myanmar Dhamma Ashin Dhamma Videomm Venerable Dhammasiri Dhammagiri Friend Ashin Eaindacariya Ashin Eaindaka Eaindar Nyana Fo Jo Ashin Gambira Ashin Ghosaka Ko Gya Ven Ghosaka Htaysarmanay Kyaw Monastery Ven Issariya Ashin Indobhasa Indobhasa Ashin Indacariya Ashin Indavisa Indo Sa Inter Cakka ရွာဦးကျောင်း Ashin Javana A Shin Jayenta Ja La Jatila Skytaung Bhaddanta Jotika Bhikkhu Jina Dhamma Jothi Janindacara Ngazun Jawtaya Myataung Bhaddanta Jotika Ven Jayantasiri Master Jatila A Shin Kawlay Ashin Karu Nya Ashin Kavidhaja Ashin Kavinda Ashin Kevala Ashin Khemacara Ashin Kumuda AshinKhema Cara Ashin Khemainda Ashin Khemika Ashin Khesara Ashin Khanti Wara Ashin Kovida (Yaw) Ashin Kovida Ashin Kovida TBF Ashin Kumara Ashin Kumara Mumbai Ashin Kumara ဘုန်းကြီးကျောင်း Ashin Kumara Karunadip Bhante Kusala Ashin Kumudra Lamin Kusalakari Monastery Khemacara Ashin Kheminda Bhikkhu Khemar Nanda Ven Khemachara Ven Kawwida (Myeik) Ven Kawwida Bo Kyaw Mg Kutho U Khe Meinda U Ku Tha La Ukok Kok Ven Khe Ashin Lay Ashin Lek Na Oozinlin Lwin Linn Dhammathu Ko Lay Ashin Mandalakk Ashin Medha Ashin Medha Ashin Mudon Dhamma Messenger Myat Pahtan U Mar Ni Ta Ashin Narin Ashin Narada Ashin Nanda Sariya Ashin Neminda Ashin Neyadhamma Ashin Nanda (Patiala, India) Ashin Nanda Ashin Narada2Ashin Ngamauk Ashi Nndsry Ashin Nipuna Ashin Nyana Dipa Ashin Nyani Ashin Nyan Ashin Nyana Ashin Nyanavara Ashin Nyandaza Ashin Nyaneinda Ashin Nyanissara Ashinyarza Damma Ashinaw Bartha ဂေါ်ရီ Bhikkhu Nandisena Venerable Ashin Nyanissara Nganuchaung Thar Nishantha Liyanaarachchi Noble Eightfold Path Nanda Cara Nan Diya Nai Lay Nandavamsa Ashin Bone Nyan Unagasena Siba Venerable Ashin Nyanissara Ashin Osadha Ashin Obha Osadha Sara Osadha Ashin U Oak Zaw Ta Ashin Panna Ashin Pannajota Ashin Pandicca Ashin Pannasami Ashin Panyin Alanka Pannobhasa Ashin Punnyananda Ashin Panyin Drv Parami Pangya Wangsa Pannasiha Bhivamsa Pannyissara Sayadaw Pannasiha Bhivamsa Polonnaruwe Dammawansa Thero Pyinnya Zawta Ugga Pandita Ven Pandita Venpunna Vamsa Ven Pannavudha Ven Pyinnyardhikarlink Oo Pannissara Ko Pinnyar Ashin Rsein Ashin Revata Rob Williams Revata Joedy Dhamma Retkhita Russia Sayadaw Ven Rajinda Ashin Sandaw Ashin Silo Ashin Sopaka 1 Ashin Sucitta 1 Ashin Sucitta2Ashin Sutacara Ashin Surira Ashin Sundara Bhaddanta Sopaka Bhaddanta Sopaka Ggw Suriya Suriya Nana Setthila Min Hla Samaneri Thitacarini Silavamsa Ashin Sitagu Hsipaw SitaguStar Student Selection Shwe Mantha Usu Nanda Ven Sagga Ven Sirinda M Sri Nanda Ashin Teza Ashin Tayzaniya Ashin Tayzaw Ashin Teza Ashin Tejinda Ashin Thiha Ashin Thunara Ashin Thit Sar Ashin Tikkha Ashinti Loka Ashintayzeinda Tay Ahintaizawbartha Bartha Ashin TiLoka Ashin Therasabha Ashin Tikkha-khinmon Taze Sayadaw Teja Vudha Thitsar Parami Tilawka Rama တိလောကာရာမကျောင်းတိုက် Thanti Thitsar Theravamsa Lankara Thiha Nyarna Utakekha Nyarna Utejadipati Ti Ashin Uttama Ashin Ukkamsa Ashin Vannita Ashin Varitta Ashin Varitta Ashin Vayama Ashin Vasavapde Ashin Vasavin Ashin Vicara Ashin Vilasa Ashin Vimala Ashin Visarada Ashin Visuta Ashin Vicakkhana Ashin Viriyadhamma Bhikshu Vimalo Bhikkhu Vayama Vajira Buddhi Ven Vilasa Ven Vilasa Ven Visuta Ven Vicittalankara Vicitta Mandalay Vila Sagga Vinaya Sami Vi Ma La Vi Motti Vam Sa Pa La Vannissara Ven Ashin Warthawa Ashin Waypolla AshinWathawa Warso Wai Pulla Wai Pon Wainyein Aungsoe Ashinyarza Damma Yaza Yazawintha Yazawintha Ashin Zanaka Ashin Zatila Ashin Zatila Ashin Zawana Ashintay Zeinda Ashin Zawti Uzawti Ka Uza Zatila ဗုဒ္ဓဟောကြား မြတ်တရား ဘုရား တရား သံဃာ ဂရုဏာနှလုံးသား ဂရုဏာနှလုံးသား န.ပ.သ ရန်ကုန် ပရဟိတလူငယ် အသင်း မနာပ ဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ သီတဂူစတား ရန်ကုန် သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်း အရှင်ကောမလ ဆန်နီနေမင်း အရှင် ဣန္ဒော ဘာသ ဥုးကောသလ္လ လိမ္မာသူ သကျ ပုတ္တ အရှင် ဇဋိလ အရှင် သီလက္ခန္ဓ အရှင်သာမိ မုံရွာ ဓမ္မ မိတ်ဆွေ ရှင် ဥာ ဏိန် သာသနာ့ မျိုးဆက် ကိုးဘွဲရဆရာတော် အရှင်အာစာရာ လင်္ကာရ ထက်အောင် ဦးသဇ္စန ဘိုသစ် ရတနာ လင်္ကာရ သဲကုန်း သီတဂူ လင်္ကာ အရှင် အသင်းများ Ivory Thunderbolt ပရဟိတလူငယ်အသင်း(YCP) နိဗ္ဗါန်ဆော် ဓမ္မဒါနအသင်း Buddharamsi Temple စံကျောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း သီလရှင်များ နန္ဒ စာရီ Carita Nyarni Medha Cari Vimalar Zarye
အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အဘိဓါန်
သမုဒ္ဒသုတ် - (ကြီးကျယ် များပြားသော ရေအစု)
စဏ္ဍသုတ်- ကြမ်းတမ်းသူ... သိမ်မွေ့သူ...
တရား ၁၂-မျိုး အမေး အဖြေ...
ပုဏ္ဏိယသုတ်- တရားတော် မထင်လာခြင်း...
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသုတ်- (အကြောင်းတရားကိုစွဲ၍ အကျိုးတရားတ...
ဥရဂပေတဝတ္ထု၊ အချစ်ဆုံး သားလေး သေဆုံးလျက်...
အဝဏ္ဏာရဟသုတ်- (ဂုဏ်ကျေးဇူးကို မထိုက်သည်)
ဗောဇ္ဈင်- (အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ် သိခြင်း၏ အကြောင်း)
ဒီဃနခသုတ်... အယူဝါဒရေးရာ ...
၆... အဝိဟိံသဓာတ် (ဓာတ် ၆-ပါးမှ)
၅... အဗျာပါဒဓာတ် (ဓာတ် ၆-ပါးမှ)
၄... နေက္ခမ္မဓာတ် (ဓာတ် ၆-ပါးမှ)
၃... ဝိဟိံသဓာတ် (ဓာတ် ၆-ပါးမှ)
၂... ဗျာပါဒဓာတ် (ဓာတ် ၆-ပါးမှ)
၁... ကာမဓာတ် (ဓာတ် ၆-ပါးမှ)
ဓာတ် ၆-ပါး သုတ္တန်နည်း...
ဥပါသကသုတ်- (ရတနာသုံးပါး ဆည်းကပ်သူ)
ဓနိယသုတ်- (ဥစ္စာရှင်- ပိုင်ရှင်)
နဠမာလိကာထေရီအပဒါန်- ကျူပန်းလှူဒါန်းရသော အကျိုး
ဝဇိရာသုတ်- (စိန်ရတနာ၊ ၀ရဇိန်လက်နက်)
အပိုင်းအခြားမရှိသော သီလ ...
သီလသည် မည်မျှသောတရား၏ စုပေါင်းရာဖြစ်သနည်းဆိုသော် ....
တပ်စွန်းမှု 'ရာဂ'ကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိရန် ...
ကောက်ကျစ်သော ပရိသတ်နှင့် ဖြောင့်မတ်သော ပရိသတ်...
ဣနြေ္ဒ ၂၂-ပါး- (အစိုးရခြင်း)
တရား နှစ်ပါးစု၊ သင်္ဂီတိသုတ်...
ပဌမ မိဂဇာလသုတ်- အဖေါ်နှင့်နေသူ- မနေသူ...
အဝိဇ္ဇာပဟာနသုတ်- (အမှန်မသိမှုကို ပယ်ရှားခြင်း)
ကိန္နရာတို့... လူစကားကို မပြောဆိုသည်ကား...
ပုဏ္ဏားသူဌေး စသည်တို့အား ပြောကြားခြင်း ...
အဋ္ဌင်္ဂိကသုတ်- တူရာတူရာ စုတတ်သည်
ဒဏ္ဍသုတ်- (တုတ်, လှံတံ, ဒဏ်ထားခြင်း)
စတုက္ကဥဒ္ဒေသ-မှ (ဉာဏ်ဖြင့် မသက်ဝင်မူ၍)
ဝုဍ္ဎပဗ္ဗဇိတသုတ်- (ကြီးမှရဟန်းပြုသူ = တောထွက်ရဟန်း)
ဣဏသုတ်- (အကြွေး ၊ ကြွေးမြီ)
ဇဋိလသုတ်- (ဆံကျစ်ထုံးသော ရသေ့)
ရွှေကြာပန်းလိုလန်းပါစေ... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
သံယောဂသုတ်- မေထုန်နှင့် ယှဉ်မှု မယှဉ်မှု...
ယောက်ျား၏ အဖြစ်ကို လွန်မြောက်လိုသော်...
lawkanartha. Template images by lisegagne. Powered by Blogger.